DAAWO VEDIO” Nolosha Musharax Madaxweyne Oo Halis Lagu Geliyay Gudaha Garoonka Diyaaradaha Kismaayo | Baahin Media
Wararka naga soo gaarayo magaalada Kismaayo ee xarunta KMG ah maamulka Jubbaland ayaa sheegaya in isrsaaseyn gudaha Garoonka diyaardaha magaaladaasi uu ku dhexmaray Ciidamo ilaalo u ah musharax madaxweyne Cabdinaasir Seeraar iyo Ciidanka Mamaulka
Ina la ogyahay 3 Askari ayaa ku dhaawacantay Israsaaseyn ka dhacday Garoonka Diyaaradaha ee Magaalada Kismaayo.
Sidda ay inoo xaqiijiyeen goobjoogayaal israsaaseynta ayaa timid kadib markii Ciidamada Ammanka maamulka Jubbaland ay isku dayeen in ay Baaraan Cabdi Naasir Seeraar oo kamid ah Musharixinta Utartamaya Xilka Madaxtininada maamulka Jubbaland.
Seeraar oo horay u soo noqday Afhayeenka Jubbaland ayaa si weyn ula shaqeyn jiray Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe ka hor in aysan isku dhicin, waxaana uu ka mid yahay hadda Musharaxiinta.
Musharax Seeraar iyo ilaaladisa ayaa ka biya diiday Baaritaanka waxaana taasi ay sababtay in Rasaas ay isweydaarsadan Ciidamada Ammaanka iyo kuwii Ilaalinayay Cabdi Nasir Seeraar.
Wararka qaar waxa ay sheegayaan in Ciidanka dhaawacmay ay yihiin Ciidanka Ilaalada Musharax Seeraar.